ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အခြေခံကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အခြေခံကျန်းမာရေးဌာနခွဲသည် အဓိကအားဖြင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေကြသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါ သည်။
အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ (မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးမှူးအဆင့်(၁)၊ ကျန်းမာရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် (၁) နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် (၂) တို့၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များဖြစ်သော ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် နုတ်ထွက်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ထို့အပြင် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျန်းမာရေးလုပ်သားများမွေးထုတ်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများတွင် အသုံးပြုမည့် Kit ပုံးများနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျန်းမာရေးလုပ်သားများ အသုံးပြုမည့် Kit ပုံးများထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်/ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ဌာနခွဲများသို့ သွားရောက် ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်၊
စီမံချက်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစီမံချက်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စီမံချက်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေး၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ ပြည်ဝင်ခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက် တင်ပြလာသော ကိစ္စရပ်တို့ကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများ၊ အသင်းအဖွဲ့ များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Activities of Basic Health Services (BHS) Section, Department of Public Health
Basic Health Services (BHS) Section is mainly responsible for rural health development and administration of Basic Health Services Professionals (BHSP), (Township Health Assistant, Health Assistant I, Health Assistant, Public Health Supervisor I and Public Health Supervisor II) who served for the promotion of the health of the rural community.
Basic Health Services Section is responsible for the appointment of the new Basic Health Services Professionals like Health Assistant, Public Health Supervisor II, and promotion of the BHSP, retirement and resignation matters of them.
Moreover, BHS section takes care of other activities including providing training BHS for strengthening capacity, supporting required Kits, supervision to Region/State/District/Township Health Department, Rural Health Centers and Sub centres, production of Voluntary Health Workers and training and refresher training to Voluntary Health Workers.
Basic Health Service Section is also operating on Primary Health Care Project and Elderly Health Care Project in coordination with World Health Organization, providing permission for local Non-governmental organization, managing for signing of Memorandum of Understanding (MOU) for international and local non-governmental organization and managing visa issue for international experts. BHS section operates such activities in cooperation with other sections from Department of Public Health.